အရေးကြီးသော်လည်း သွေးမနီးကြသေးသူများ ~ Myanmar Express
From : ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ယခုဖြစ်ပျက်နေသော အဖြစ်အပျက်တို့သည် ခေါ်တောကုလားတို့၏ ကျူးကျော်မှုဖြစ်သည် ၊ အကြမ်းဘက်မှုဖြစ်သည်ဆိုမှာ စဉ်းစားနေ သုံးသပ်နေ အကဲဖြတ်နေရမည့် ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပါ လယ်ပြင်မှာဆင်သွားသလိုရှင်းနေ၏ ၊ တဆက်တည်းဆိုသလိုပင် ထိုအရေးသည် အစိုးရ၏အရေး ၊ ရခိုင်အရေး မဟုတ် တစ်မျိုးသားလုံး၏ အရေးဖြစ်သည် ဆိုသည်မှာလည်း အထူးပင်ပြောစရာမရှိပါ ။သွေးကစကားပြောပါသည် ၊ သွေးကသိပါသည် ၊ ထိုသို့သွေးကစကားပြောသည့်အတွက်ကြောင့်ပင် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှမြန်မာတို့သည် မတိုင်ပင်ထားရပါဘဲနှင့် Facebook ,Twitter အစရှိသော လူမှုရေးကွန်ယက်များတွင် အခြားအလုပ်မလုပ် ထိုအမျိုးသားရေးဖြင့် အချိန်ကုန်နေကြရသည် ၊ အလှပုံများလည်းမတင်ကြတော့၊ ခရီးသွားမှတ်တမ်းများလည်းတက်မလာတော့ ၊ ကိုယ့်မျက်နှာကိုယ် အမူယာပုံအမျိုးမျိုးလုပ် လက်တစ်ဘက်ကိုဆန့်တန်းကာကိုယ်တိုင် ဓါတ်ပုံရိုက်တင်လေ့ရှိသူများလည်း မတင်ကြတော့ အချစ်သီချင်းများလည်း share မလုပ်ကြတော့ နိုင်ငံတော်အလံပုံများ ၊ ရခိုင်အမျိုးသားအလံများ ဇာတိမာန်သီချင်းများ ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ရေးများဖြင့် အလုပ်ရှုပ်နေကြသည် ၊ တစ်နည်းဆိုရသော် အစိုးရ တပ်မတော် နှင့် ရဲ တို့က ဒေသခံများနှင့်ပူးပေါင်းကာ ခေါ်တောများကို တိုက်ပွဲဝင်နေချိန်တွင် အွန်လိုင်းပေါ်တွင် မြန်မာတို့အမျိုးသားရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြသည် ၊ ထိုအားသည် အသေးအမွှားမဟုတ် အားကြီးလှ၏ ၊ ကြက်သီးထလောက်သည် ၏ ၊ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှိလှ၏ ထိုသူများကို အွန်လိုင်းစစ်သည်တော်များ ( Myanmar Online Warriors ) များဟုဂုဏ်ပြုခေါ်တွင်ရမည်သာ ဖြစ်၏ ။ထိုသို့ တကမ္ဘာလုံးရှိမြန်မာတို့ အမျိုးသားရေးအတွက် အရေးကြီးလှသဖြင့် သွေးနီးနေကြချိန် တွင် ရောမမြို့ကြီး မီးဟုန်းဟုန်း တောက်လောင်ပြီး နန်းတော်နေရာလေးကွက်ကွက် ကျန်သည့်တိုင် တယောထိုးမပျက် နေနိုင်ရက်သော နီရိုးဘုရင်ကဲ့သို့ နေစိမ့်သူများလည်းရှိ၏ ၊ တစ်နည်းဆိုရပါမူ အရေးကြီးသော်လည်း သွေးမနီးသူများလည်း အံ့ဘွယ်ရှိ၏ ၊ ထိုနီရိုးဘုရင်၏ မျိုးဆက်မြန်မာများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်၏ ။ အခုမှ ရွှေညဝါ ဆရာတော်လည်း ဝစီပိတ် ကျင့်နေသည် ပြဿနာ တစ်ခုခုဆိုရင် ရှေ့ဆုံးက အော်နေကျ သွန်းနေစိုး ယခု နှာဆေးနေသည် အဓိကရုဏ်းဖြစ်ရင် ဝေဖန်တတ်တဲ့ ဘလော့ဂါကြီး ငယ်နိုင်လည်း အခုမှ ယောင်္ကျားကိုပဲ ပြုစုရင်း အချိန်ကုန်တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြန် ဘီဘီစီ က ကိုချိုလည်း ဒေါ်လာ နဲ့ သတင်းမှား အရောင်းအဝယ် လုပ်ကောင်းတုန်း နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ ထင်ရှားသောနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များသည် မိမိတို့၏ပုံရိပ် ၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအမြင် များအရ အခြားသောစကားများကိုမပြောစေကာမူ ယခုဖြစ်နေသောရခိုင်အရေးသည် ခေါ်တောခေါ် ရိုဟင်ဂျာတို့၏ ကျူးကျော်မှုဖြစ်သည် ၊ မီးရှို့မှု လူသတ်မှုများဖြစ်သည် ၊ ထိုရိုဟင်ဂျာသည် သမိုင်းကြောင်းအရ မြန်မာမဟုတ် ဟူသော စကားများကိုမူ ပြောသင့်သည် အခိုင်အမာဆိုသင့်သည် ၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများမှလွဲ၍ တစ်ဦးတလေမျှမပြောကြ ကုလားများ မုန်းသွားမှာကြောက်နေကြသည် ၊ အစွန်းထွက်သွားမှာကြောက်နေကြသည် ၊ စကားမှာသွားမှာစိုးရိမ်နေကြသည် ၊ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေသော ရခိုင်အမတ် ဒေါက်တာအေးမောင်သည် ပင်လျှင် လူမုန်းမခံရဲ ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏ ၊ထိုသူများကို နီရိုးမျိုးဆက် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များဟုသာဆိုရမည်ဖြစ်၏ ။မာမီကတော့ လက်ချမီး တို့ဖက်မှာ ရှိတယ်အခုမှ ဦးခွန်ထွန်းဦးလည်း ဘီယာဗိုက်ကြောင့် သွေးတိုးနေသဖြင့် မဝေဖန်နိုင်လွှတ်တော်အမတ်ကြီး ဦးသိန်းညွန့် လည်း နှုတ်ပိတ်နေလွှတ်တော်အမတ်ကြီး ဦးဝင်းထိန်လည်း ဘာမှဝင်မပြောရဲPublic Speaker များ Public Speaker ဟုခေါ်သော လူထုကိုယ်စားပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများ ( ဥပမာ လူထုစိန်ဝင်း ၊ ဇာဂနာ ) ၊ စာပေဟောပြောပွဲများတွင် အစိုးရကိုမထိတထိအပြောများဖြင့် လူထုလက်ခုပ်ကို ယူခဲ့သူများသည် ၊ ယခုအခါ ကုလားများကို ထိုမထိတထိအပြောများဖြင့် ဘယ်လိုများပြောလေမလည်း ၊ ပြည်သူ့ဘက်က ဘယ်လိုများပါလာလေမလည်း စောင့်မျှော်ကြည့်၏ ရက်အတော်ကြာသည်အထိဘာသံမျှထွက်မလာခဲ့ ၊ ပွဲပြီးမှ အစိုးရက ဟိုနေရာလိုတယ် ဒီနေရာလိုတယ်ဆိုပြီး လူတတ်ကြီးလုပ်ပြီးထွက်လာကြဦးမည်ဖြစ်၏ ၊ Public Speaker များသည် Public silencer များဖြစ်ကုန်၏ ၊ ထိုသူများကိုလည်း နီရိုးမျိုးဆက် Public Speaker များဟု ခေါ်ရမည်သာဖြစ်၏ ။လွတ်တာနဲ့ ပြောပြီဆိုတဲ့ ဇာဂနာလည်း အခုတော့ ရေငုံထားလို့ နှုတ်ပိတ်နေလူထုစိန်ဝင်းလည်း အခုမှ ဆောင်းပါးအရေး နားနေသည်သတင်းစာ ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်လည်း ရုတ်တရပ် ပါးစပ်မဟနိုင်သည့် ရောဂါရနေကာတွန်းဆရာများ ကာတွန်း၏အားသည် အလွန်အင်အားကြီးမားလှသည်ကို လူတိုင်းသိပါ၏ ၊ မြန်မာ မြန်မာချင်းဖြစ်သော စစ်အစိုးရပြုတ်ကျရေး ၊ ဧရာဝတီအရေး ၊ ဖယောင်းတိုင်အရေး တို့တွင် ကာတွန်းတို့သည် မျိုးစုံထွက်၏ ၊ အချိန်မဆိုင်းထွက်၏ ၊ ထွက်သမျှကာတွန်းတို့သည်လည်း ထက်မြက်လှ၏ ၊ ခုကုလားနှင့်ဖြစ်သောအရေးတွင်မူ ကာတွန်းဆရာတို့သည် ကုလားရုပ်မဆွဲတတ်ကြတော့ ၊ အဆက်ဆက်သော အစိုးရအာဏာပိုင်များ၏အရုပ်နှင့်သာ လက်အံသေနေ၏ ၊ ထိုသူများကိုလည်း နီရိုမျိုးဆက် ကာတွန်းဆရာများဟုသာ ခေါ်ရမည်သာဖြစ်၏ ။( မှတ်ချက် ။ ။ ထိုအထဲတွင် လူငယ်ကာတွန်းဆရာအချို့မပါ ပါ ထိုလူငယ်ကာတွန်းဆရာတို့သည် အွန်လိုင်းပေါ်တွင် အထူးပင်တက်ကြွနေ၏ ဥပမာဆိုရသော် လူငယ်ကာတွန်းဆရာ ကျော်သူရိန်လွင် ဆိုသူသည် နေ့မအိပ်ညမအိပ်ဆိုသလို အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ထိုင်ရင်း လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ ဆောင်ရွက်မှုကို အားမလိုအားမရ ဖြစ်နေသည်ကို ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် သိပါသည် ၊ အသိအမှတ်ပြုပါသည် ၊ ထိုသူများကိုမဆိုလိုပါ ၊ အိုကြီးအိုမများကိုဆိုလိုပါသည် ၊ ထိုသို့ဆိုလိုသည်မှာလည်းထိုဆရာတို့ကိုမုန်း၍မဟုတ် ကုလားတွေကိုဆော်စေချင်၍ ဖြစ်ပါသည်။ )အခု မှ အော်ပီကျယ်လည်း မကျယ်နိုင်တော့ကာတွန်းဟန်လေး အကျန်ကျွေးတာလေး စားထားတော့ ကာတွန်းမရေးနိုင်ဟာကျူလီ ကသာ လည်း ကြာကူလီ မသာ ဖြစ်နေပြီလား မသိပညာရှင်များ ပညာရှင်များဆိုသည်မှာ အထူးသဖြင့် သမိုင်းပညာရှင်များ ၊ နိုင်ငံတကာအရေးကိုကျွမ်းကျင်သောပညာရှင်များ ၊ သံရေးတမန်ရေး အတွေ့အကြုံရှိသူများကို ဆိုလိုပါသည် ၊ ထိုသူတို့သည် ၊ ယခုအချိန်တွင် ရိုဟင်ဂျာသည် မြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်ကြောင်း သမိုင်းအထောက်အထားများ ဖြင့် ကမ္ဘာသိအောင် လုပ်သင့်သောအချိန်ဖြစ်ပါသည် ၊ အနည်းဆုံး ထိုရိုဟင်ဂျာ တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်ကြောင်း ယခင်ရေးသားချက်များကို ပြန်လည်ကောက်နှုတ်ကာ Highlight လုပ်သင့်လှပါသည် ၊ မည်သူတစ်ဦးတစ်လေမျှထိုသို့ဆောင်ရွက်သည်ကိုမတွေ့ပါ ၊ ထိုပညာရှင်တို့ကိုလည်း နီရိုး မျိုးဆက် ပညာရှင်များဟုသာ အားနာနာနှင့်ကင်ပွန်းတပ်ရမည်သာ ဖြစ်ပါသည် ။အခု မှ ဦးမြင့်လည်း နှာဆေးနေကယားရေလွှတ် ချစ်ဦးညို လည်း ရေမရလို့ မလွှတ်နိုင် ဖြစ်နေအကျဉ်းသား မလွှတ်ရင် မုတ်ဆိပ်မရိတ်တဲ့ ကျော်သူလည်းရိုဟင်ဂျာတွေ မပြန်မချင်း ခေါင်းမြီးခြုံမည်ဟု မကြေညာရဲဆောင်းဦးလှိုင်၊ သံသာဝင်းနဲ့ အနဂ္ဂတို့လည်း အခုမှ ရုပ်ရှင်ရိုက်နေသလားရဲတိုက်ဖောင်ဒေးရှင်းလည်း ရခိုင်ပြည်သူများကို ကူညီဖို့ အသံမထွက်ဤဆောင်းပါးပါ ရေးသားချက်များသည် အထက်တွင်ဆိုခဲ့သော နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ ၊ Public Speaker များ ၊ ကာတွန်းဆရာများ ၊ ပညာရှင်များကို နစ်နစ် နာနာ ပြောလို၍မဟုတ်ပါ ၊ အပြစ်တင်နေခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ ၊ မလေးစား၍လည်းမဟုတ်ပါ ၊ ထိုသူတို့၏အစွမ်းကို မယုံကြည်၍လည်းမဟုတ်ပါ ၊ ဆရာတို့၏ အားကိုတောင့်တနေသော ၊ အားမလိုအားမရ ဖြစ်နေသော ၊ ဆရာတို့ကို အားကိုးသော ပြည်သူတစ်ယောက်၏ တောင့်တမှုသာ ဖြစ်ပါသည် ။ လေးလေးစားစားဖြင့်Myanmar Express
11 June 2012 23:46
ဒီဝက်ဆိုက်ကိုရေးနေသူပာာ ဘယ်သူလဲဆိုတာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ သိနိုင်လောက်ကြလေပြီ။Rohingya တွေကိုဘယ်မြန်မာမှ လက်မခံပါဘူး။ဒါပေမဲ့ လူတော်ဆိုတာအချက်အလက်ပြည့်ဆိုမှ သုံးသပ်ချက်ကိုထုတ်ရတဲ့ သဘောရှိတယ်လေ။စောင့်ကြည်ပါ များမကြာခင်မှာ ပြောကြတော့မှာပါ။တိုင်းရင်းသားတွေဟာ အချင်းချင်းစစ်ဖြစ်တတ်ကြပေမဲ့ တိုင်းတပါးသားတွေကိုတော့ လုံးဝလက်မခံပဲ စုပေါင်းတိုက်ခဲ့ကြတဲ့သမိုင်းတွေဟာ မြန်မာရာဇ၀င်မှာပေါပါတယ်။
12 June 2012 00:34
Chit Oo Nyo ka iphone daw bar dwe nae...Opera music, do want to sing?
ချက်ကြီးရေ ဒေါ်စုဆိုတာ ဗိုလ်ချုပ်သမီးအစစ်မှ ဟုတ်ရဲ့လားကွာ။ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ အခြားကိစ္စတွေမှာ အားနည်းချက်တွေရှိရင် ရှိခဲ့မယ်။ ဘိုးဘွားအမွေကို ထိပါးလာတဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်တော့ အင်္ဂလိပ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဂျပန်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကုလားကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောရဲ တိုက်ရဲတယ်။ အခု..သူ့ သမီးကျတော့ အနောက်အုပ်စုရဲ့ လက်သပ်မမွေးထားတဲ့ ခွေးမတစ်ကောင်လို ငြိမ်နေပါလား...။
12 June 2012 04:35
12 June 2012 04:41
ဟက်ဟက်.. မြင်တတ်ပါပေတယ် .. အော်ပီကျယ်နဲ့ ဟာဂျုလီ ကသာ ကို ပြောချင်နေတာကြာပီ.. သူများဖယောင်းတိုင်ဆို လိုက်ဖယောင်းနေတဲ့ သေခါနီးဘဲနာကြီးတွေ ဒီလိုမျိုးကျတော့ ဘာငုံပြီး နှုတ်ပိတ်နေလဲ မသိဘူး .. ပါမှပါပါ့မလားလို့ တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်းလာတာ .. ပါသဗျာ ဘဲနာနှစ်ယောက်လုံး .. ကျေးဇူးပါ MEG )))
အမေစုပန်းချီ မဆွဲဖူးတဲ့ပန်းချီဆရာတွေများရှိသေးသလားဗျို့သူများစုတိုင်းလိုက်စုတဲ့ သောက်ပေါစောက်ရူးများပါတကားဥာဏ်မရှိဘူးပြောလည်းမကြိုက်ချင်ကြဘူးဟားဟားဟား
ကျွန်တော်တို့ကျွန်မတို့ဟာဆိုရင် တိုင်းပြည်ကိုအသရေဖျက်ပြီးမှစားသောက်မြိုဆို့လို့ နာမယ်ကြော်ကြားခဲ့ကြရုံမကယခုချိန်မှာ ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာ ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာကုလားလီးများအဆို့ခံထားရလို့တစ်ယောက်မှ ပါးစပ်မဟနိုင်ကြတော့ပါခင်ဗျာရှင်...သနားကြပါခင်ဗျာရှင်မပြောကြပါနဲ့ခင်ဗျာရှင်ရှက်လွန်းလို့ပါမပြောကြပါနဲ့ဗြဲ
All they like rohinger dick.
ဟိဟိ သူများတွေပြောတာနဲ့တင် ဘာပြောရမှန်းမသိတော့ဘူး
"Help" our country.